Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » UMnyhadala weNdebe yeCarolina Uzoba kwiiPaddle Surfers eziphezulu
Indebe yeCarolina ngumnyhadala weentsuku ezine weziganeko ezinemidyarho esixhenxe, iisemina kunye neeklinikhi ngobuchule, imiboniso yemveliso kunye nemiboniso.
"Indebe yeCarolina kuphela kombutho osemthethweni wePaddlesurf Professionals umcimbi ngo-2021," utshilo uTristan Boxford, umphathi we-APP. “Lo msitho uzakuba nomgama omabini kunye ne-sprints ngemali ye-APP yebhaso. Nangona kunjalo, ngenxa yeemeko ezingaqhelekanga, asiqhubeki phambili nokhenketho lwehlabathi kulo nyaka. ”
I-APP yamkelwe kwaye yagwetywa njengotyelelo lwasebukhosini lwaseburhulumenteni lokuhamba ngesikhephe yi-International Federation Committee yeFederal for Surfing Sports kunye ne-International Surfing Association.
Eyona ndawo ibekwe kuyo elunxwemeni lolwandle kunye neelwandle ezisecaleni kwesandi, zonke iintlanga kunye nemisebenzi iqala kwaye iphele eBlockade Runner Beach Resort, indawo yokuhlala esemthethweni yeNdebe yeCarolina. Imisebenzi iqala nge-4 kaNovemba kwaye iqukunjelwe nge-7 kaNovemba.
Ukwahlula okwesibini kwihlabathi kwi-paddleboard yabasetyhini, u-Epreli Zilg waseNyakatho Carolina wabhengeza izicwangciso zokukhuphisana kwiNdebe yamangcwaba yaseCarolina ekhohlakeleyo e-Wrightsville Beach. “Ndinezicwangciso zokubaleka ngoNovemba,” utshilo uZilg. Olunye lolona hlanga lukhulu emhlabeni kwaye yenye yezona zifundo zinzima.
"Ugqatso [Amangcwaba] lukhethekile, lukuhambisa kulwandlekazi nakwi-Intracoastal, ukuhamba ngeendlela ezimbini, ukulwa namaza, nokungena nokuphuma kulwandle," utshilo uZilg. “Luvavanyo olugqwesileyo lwezakhono zokujikeleza, kwaye imeko kamama ayisoloko idlala kamnandi. Ngaphandle kweminye imidyarho ye-surf-zone ezinikezelweyo, umdyarho wamangcwaba uphezulu apho ngenxa yobunzima, ngakumbi ukuba uphela usilwa nolwandle olunzima. Kukwangumgama omalunga nesiqingatha semarathon, ke oko okusila kuyinyani. ”
Abanye abangenayo kwangoko baquka uCasper Steinfath, iQela leHlabathi elilawulayo kwicandelo lamadoda. Ukukhula kwilali yokuloba eDenmark, uSteinfath wakhulisa umdla wemidlalo yasemanzini ngaphambi kokuba ahambe, ekhwele kwibhodi kayise yaselwandle. Ngoku uneminyaka engama-28 ubudala, uSteinfath yenye yeembaleki zezemidlalo zamanzi, ephumelele uloyiso oluninzi kunye nobuntshatsheli ngexesha lomsebenzi wakhe.
Ngo-2020, uSteinfath wayengowokuqala ukumisa iphenyane yedwa eSkagerrak, umgama oziikhilomitha ezili-130 wamanzi akhohlisayo ahlula iDenmark isuka eNorway.
Umkhweli waseFransi u-Arthur Arutkin, obekwe kwindawo yesibini kwihlabathi, kunye no-Titouan Puyo wase-New Caledonia, obekwe kwindawo yesixhenxe, batyikitye kolu khuphiswano-nabanye abaninzi abazokuza.
I-Seychelle Webster, iQela leHlabathi elilawulayo kwicandelo labasetyhini le-APP, liza kuya kwiNdebe yeCarolina kwaye liceba ukubonelela ngeeklinikhi, ukubakho ngeentsuku zeedemo, kunye nokunceda ngexesha loKhuphiswano lwaBantwana. Andicwangcisi ukubaleka kulodyarho kulo nyaka, utshilo uSeychelle. “Indebe yeCarolina ibisoloko iyenye yeembaleki zam eziphambili zonyaka. Kodwa okwangoku, eyona nto iphambili kwaye owona mceli mngeni kukuba ndikhulelwe. Yiyo ke le nto kujongwe kuyo kulo nyaka, kwaye andizukukhuphisana. ”
“Ukukhuphisana okanye ukungakhuphisani, kule veki eWrightsville kuzakubamnandi kakhulu,” wongeze watsho uSeychelle. Ndonwabe kakhulu kukubona ndifumana wonke umntu kwaye ndixhasa i-APP kunye neNdebe yeCarolina nangona ikhona imiceli mngeni kwihlabathi. ”
Indebe yeCarolina iququzelelwe yiWlightsville Beach Paddle Club kwaye yenziwa yiKona Brewing Inkampani. Isisa esichongiweyo seNdebe yeCarolina sondla iNorth Carolina, i-501 (c) (3) engenzi nzuzo enjongo yayo ikukubonelela ngokutya okusempilweni kubantwana abalambileyo, ukubenza baphumelele kwigumbi lokufundela nakwindawo abahlala kuzo.